IVenus kwiPisces Man: Mazi ngcono - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana IVenus kwiPisces Man: Mazi ngcono
IVenus kwiPisces Man: Mazi ngcono
IVenus kwindoda yasePisces ngumntu onemvakalelo kakhulu, onobuntununtunu, kwaye onothando neqabane lakhe. Kudala ekhangela loo mntu ubalulekileyo ebomini bakhe bonke, kwaye wenza injongo koku.
Ukufumana iqabane lomphefumlo, umntu oza kubelana naye ngalo lonke ixesha lokonwaba, umntu omxhasayo ngamaxesha anzima, ngowona mnqweno wakhe mkhulu. Iimvakalelo zakhe zinyanisekile kwaye zicocekile.
I-Venus kwi-Pisces indoda ngamafutshane:
Iimpawu: Inomdla kwaye ihlala
Izinto ezingalunganga: Abagxeki nabakhohlakeleyo
Umphefumlo womphefumlo: Umntu onokufunda kwiminqweno yakhe enzulu
Isifundo sobomi: Ukulumka ngakumbi kunxibelelwano lwasentlalweni.
Uyakwazi ezona mvakalelo zinzulu kwiqabane lakhe, uthando olusuka entliziyweni olugqitha ngaphaya kwamava abanye. Ufuna ukuba nolwalamano olufanelekileyo, ukufumana ukugqibelela, ukufumana indlela yokufezekisa iingcinga zakhe, amaphupha awayehlala enawo.
Ubuntu bakhe bothando
Unomdla kubafazi ababuthathaka nabanemvakalelo abalamkelayo icala labo lobufazi kwaye balamkele ngentliziyo iphela. Kuya kufuneka abe nobubele, abe nesisa, abe novelwano, aqonde, abe nemvo yokuthobela kunye nokuxhomekeka.
Leo man pisces umfazi ukuhambelana komtshato
Akabuthandi ubundlongondlongo okanye ukungxama ngenxa yokuba oko kuphela kudla amandla akhe kwaye kusenokude kumcaphukise.
Ngaphaya koko, iVenus kwindoda yePisces inomdla kakhulu, yenye yezona zinomdla kuzo zonke izodiac.
Ingqondo yakhe yobugcisa icimile iitshathi, iyamnika i-aura engenakufunyanwa, kanye njengehlabathi elingenakumbamba, njengoko ephula izithintelo.
Kubudlelwane, uyazi kakuhle indlela yokuphepha ukuphendula ngokweemvakalelo, kunye nokufaka uxolo kunye noxolo kwiqabane lakhe.
Lo mfo ufuna ukuhlala ngokuvisisana nehlabathi langaphandle, njengoko efumanisa ukuba ungowendalo, kodwa ikwayindawo anokuyibiza njengekhaya kuluntu lwanamhlanje, oluzaliswe yimimangaliso yetekhnoloji. Akazinzanga ngokwasemphefumlweni, iimpendulo zakhe ezahlukileyo yaba yintetho yedolophu.
Unokuba nomdla kwaye anomdla ngento ethile ngomzuzu omnye, kwaye ngokulandelayo angadakumba, ade abe nentiyo.
Ukwazi ukuba ugcina amaphupha angenakwenzeka, ufuna iqabane elinokuthi lilinganise ezi njongo, kodwa lenze ngozakuzo nothando. Ubuhle bunomdla kwinkcazo yakhe engaphaya, kwihlabathi nakwabanye abantu.
Intuition yakhe imxelela malunga nokukhuthaza kwabantu abamngqongileyo, malunga neemaski zentlalo abazinikelayo xa bephumile eluntwini, kunye neminqweno yokwenene ngaphakathi kwabo.
Indoda ezelwe kunye noVenus ePisces iyayiqonda imfuno yomlingane womphefumlo, kwaye ifuna lowo ulawulayo, ubuncinci ngokuyinxenye, ukuba abaleke oku kulungelelaniswa kwezentlalo, isangqa esikhohlakeleyo okanye ukuzenzisa, kunye nokuzikhohlisa.
Ufuna ubudlelwane obugqibeleleyo, apho anokunyibilika kubunye bokuba nesithandwa sakhe, apho anokufumana khona ukuzaliseka kweminqweno yakhe enzulu.
yenza njani i-aquarius xa uphambene
Ukuba unomdla wokufumana iqabane lomphefumlo kunye nokwakha ubudlelwane bentliziyo, indoda ezelwe kunye neVenus ePisces inokulibala ukujonga umntu osecaleni kwayo, ngaloo ndlela imeme abantu abaneenjongo ezimbi ebomini babo.
Kuya kufuneka afunde ukuzikhulula xa kubonakala ngathi enye ikho kuphela ngeenzuzo, kwaye ngesiqhelo umoya wabo uya kucima imiyalezo yealam.
Nangona kunjalo, nangona enokuba nombono malunga nokuphoxeka kwikamva, uluntu lumtyhalela ekoneni, kwaye umnqweno wakhe wokudibana nomntu otywiniweyo utywina isivumelwano.
Isimo sakhe esiphakamileyo seemvakalelo simguqula sibe ngumazibuthe wabalahlekileyo nabadiniweyo, kubantu abafuna ukulungisa amanxeba abo, kwabo bangaqinisekanga ngekamva labo.
Kulwalamano olunjalo, uyakuqonda ukuba ikamva liphethe ntoni, okanye endaweni yoko ayenzi njalo, kodwa ukufumanisa kunzima kakhulu ukwahlukana nomnye.
U-intuitively uqaphela indlela ukuhamba kwakhe okuza kuwenza nzulu ngayo amanxeba eqabane lakhe nangakumbi, kodwa i-aura engathandekiyo ekwakukwenza ukuba angabinamdla ekuhambeni kwexesha.
Uhleli ephupha ngalo mfazi ugqibeleleyo, umthandi ofanelekileyo onokumgqibezela. Ngokucacileyo uyamthanda ngaphandle kokucela nantoni na ukuba imbuyekeze kwaye uyamvuyisa ngesimo sakhe sengqondo sethemba kunye nesibonakala siqaqambile.
Ngapha koko, ukuthatha kwakhe ngokwesiko emtshatweni kusebenza kuphela ekwenzeni amaphupha akhe obudlelane obutofotofo kwaye afezeke.
Akafuni ukungavisisani kunye nokungqubana ukuba kuvele ebomini bakhe bothando, kwaye akafuni nokuba akhuphisane neqabane lakhe ngento ethile. Imvisiswano, ukulinganisela, uthando, uvelwano, kunye nokuqondana zizinto eziphambili.
Le ndoda inokuthi ithambekele ekukopeni, kodwa kuphela ukuba isangqa sayo sentlalontle siyifaka kuye le ngqondo, kuphela ukuba ikwinkampani yabasetyhini kakhulu.
Okona kubaluleke kakhulu, ukuba iqabane lakhe alizalisekisi okulindelweyo kunye neminqweno yakhe, unokufuna induduzo kwiingalo zomnye.
Ngokubanzi, nangona kunjalo, uyisithandwa esinyanisekileyo nesizinikeleyo, kodwa naye akanakulwa ngokuchasene nemiyalelo yentliziyo yakhe xa iqala ukuthumela imiyalezo yothando kwingqondo yakhe. Iqabane lakhe kuya kufuneka liqiniseke ukuba alikhohliswa okanye lithakathwe ngomnye umfazi.
mars in pisces indoda ngothando
Ngale ndoda, awusoze ufune ukuzenza ngathi ungathatha umhlaba okanye womelele ngokwaneleyo ukuba ungathatha ezona ngxaki zinzima ebomini. Ulapho ukuze anikeze ukhuseleko kunye nenkxaso, ukukukhathalela kunye neemfuno zakho.
Thembeke ngokuthe ngqo, kwaye ube novelwano ngaphezu kwayo yonke into. Uyayithanda loo nto inkazana kakhulu. Kuya kufuneka usebenze nzima ukuze umenze ngokwenyani ukuze imvakalelo yakhe yothando ibambeke emntwini wakho kuphela.
Yiba nothando, umthande, kwaye umbonise ukuba umthanda kangakanani. Yiyo kuphela kwendlela anokuqonda ngayo ukuba ungumfazi ogqibeleleyo kuye.
Ungumphuphi, kwaye uyakuzibandakanya kuphela kwinto ethile xa inethuba elithile lokuphumelela, xa umbono kwisiseko sayo inguquko, uyila izinto ezintsha, nokuba unengcinga encinci.
Ngokwam, uVenus kwindoda yePisces ngumculi othandana naye ofuna abantu abathanda izinto ezifanayo ukukhanyisa umhlaba wakhe. Abo babona umhlaba ngendlela eyahlukileyo, enemibala ethe kratya, abo bazi ukuba umhlaba uzele ziimfihlakalo ezingekasonjululwa.
Ngokwasezithandweni, izinto azilindeleyo zisenokuba ziyinyani kwaye ziphuphile, kodwa kufuneka uzame ukubeka iziqwenga ngokufanelekileyo ukuze uzalisekise iminqweno yabo. Ukuba uyakwazi ukumothusa kwaye umtsale, konke kulungile.
Amandla amakhulu alo mthonyama uvelwano, indlela ekubonakala ngathi ifunda iingcinga neemvakalelo zabantu zangaphakathi.
Uyazi kakuhle ukuba kutheni iqabane lakhe linemvakalelo, kwaye kutheni evuke emva kwexesha ngolunye usuku xa eqhele ukuba ngumntu wakusasa. Uyazibona iinkcukacha ezincinci, kwaye uyakwazi ukujongana neemeko ezinzima zeemvakalelo njengoko zibonakala.
Indoda yaseVenus Piscean ifanelwe ukuthandwa ngonaphakade kananjalo ukuba nolwazelelelo nothando.
Akasoze agxeke okanye akwenze uzive umbi xa wenze impazamo, kodwa kuya kufuneka afunde ukuyeka uxinzelelo lweemvakalelo amaxesha ngamaxesha. Mhlawumbi ungayijolisa ngobugcisa. Oku kunokuba ngumbono olungileyo.
Nge-27 ka-Agasti iZodiac yiVirgo-Ubuntu obupheleleyo beHososcope
I-Sagittarius Sun Aries Moon: Ubuntu obufuna
I-scorpio indoda ihlasela umtshato womfazi
umfazi webhinqa lomtshato wescorpio
Leo man kunye ne-scorpio umfazi ukuhambelana
Uthini umqondiso we-zodiac wangoNovemba 6
loluphi uphawu ngo-Epreli-28
indlela yokufumana umfazi we-capricorn ukuba athande